पारवहन प्रोटोकल सम्झौताले नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश
साँघुन्यूज डटकम संवाददाता
(अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि चीनमा अहिले दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम भइरहेको छ । फोरममा नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलगायत सहभागी छन् । जसमा वेल्ट एण्ड रोडका लागि नेपालले राखेको प्रस्ताव पारित भएको छ । पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा पनि दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको छ । यसले भावी दिनमा सरकारले भन्ने गरेको समृद्धिको यात्रा र कूटनीतिमा कस्तो असर पर्ला ? यिनै प्रश्नहरूको वरिपरि रहेर हामीले पूर्वराजदूत समेत रहेका परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसंग सम्वाद गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेपः सम्पादक)
० अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि चीनमा भइरहेको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ । नेपालको सहभागिता र त्यहाँ भएका सम्झौतालाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
–नेपाललाई बेल्ट एण्ड रोडमा जान नदिन भुटानलाई जस्तै गरी छेक्न खोजिएको थियो । छेक्न खोज्नेहरू यसपटक असफल भएका छन् । चीनको पहलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपालले बेल्ट एण्ड रोडमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नेपाल अब बेल्ट एण्ड रोडको पूर्ण सदस्य बनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नयाँ गतिविधि आएको छ, त्यसमा नेपाल अन्तर सम्बन्धित हुन पुगेको छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय पक्ष भयो । यसको राष्ट्रिय पक्ष पनि छ ।
० बेल्ट एण्ड रोडबारे चर्चा गर्ने नै छौं । त्यसभन्दा अघि पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा हस्ताक्षरबारे कुरा गरौं । यसलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने ?
–यसअघि नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदा पारवहनसम्बन्धी सन्धि भएको थियो । तर, कार्यान्वयनका लागि सुख्या बन्दरगाह र समुद्र जाने बन्दरगाह टुंगिन बाँकी थियो । यसपटक यो विषय टुंगिएर प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ ।
० नेपालले यस्ता धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । त्यस्ता सम्झौताबाट ठूलो राहत मिल्ने प्रचारबाजी पनि हुन्छन् । तर यथार्थतामा ठोस उपलब्धि कमै मिलेको छ । विगतका सन्धि सम्झौता र यसमा के भिन्नता छ ?
–विश्वमा नेपालको परिचय ल्यान्ड लक कन्ट्री (भूपरिवेष्ठित) मुलुकका रुपमा छ । भूपरिबेष्ठित हुँदा हामीले धेरै असुविधा झेलेका छौं । तर, पछिल्लो सहमतिले नेपालको परिचय बदलिएर ल्यान्ड लिग्ड भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपाललाई वैकल्पिक बाटो पनि प्राप्त भएको छ । यो नेपालको ठूलो उपलब्धि हो ।
० नेपाल पटक–पटक नाकाबन्दीको शिकार बनेको थियो । अझै पनि यसको नेपालीमा छ । भारतसँग रहेको हाम्रो परनिर्भरता पछिल्लो सहमतिले तोडियो भन्ने तपाईंको विश्लेषण हो ?
–वैकल्पिक मार्ग नहुँदा हामीले पटक पटक नाकाबन्दीको सामाना गर्नु परेको थियो । संविधान जारीपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीको पीडा अझैसम्म नेपालीले बिर्सेका छैनन् । ताजा बनेर बसेको छ । धेरैलाई अझै पनि भारतले नाकाबन्दी लगाउने त्रास छ । तर, अब भारतको नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्ने दिन नेपाल–चीनबीच भएको पछिल्लो सहमतिले सधैंका लागि अन्त्य गरिदिएको छ । अन्य देशले पनि अब नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउन सक्ने छैनन् ।
० भनेपछि यसपटक चीनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि यसपटक आयोजना गरेको दोस्रो बेल्ट एण्ड रोड फोरम नेपालका लागि वरदान सावित भएछ होइन ?
–निश्चितरुपले वेल्ट एण्ड रोड फोरम र नेपाल–भारतबीच भएको पारवहन प्रोटोकल सम्झौताले नेपाललाई नयाँ युगमा पु¥याएको छ ।
० चीनको महत्त्वकांक्षी योजना वेल्ट एण्ड रोडबारे कुरा गरौं । तपाईंले अगाडि भन्नु भयो कि नेपाललाई यसमा जान नदिन ठूलो प्रयत्न भएको थियो । जसरी भुटानलाई रोकिएको थियो । यसमा नेपाललाई ल्याउन चीनले अलि बढी नै कसरत गर्नुपरेको तपाईंको बुझाइ हो ?
–वेल्ट एण्ड रोडको चिनियाँ जुन महत्त्वकांक्षी योजना छ, यसमा सबैको आ–आफ्नै स्वार्थ छन् । नेपाल पनि यसबाट लाभ लिन चाहन्छ । चीन र नेपाल दुवैको स्वार्थ मिलेकाले यसपटक नेपालले वेल्ट एण्ड रोडमा सहमति जनाएको हो ।
० यसमा नेपालको स्वार्थचाहिँ के छ ?
–वेल्ट एण्ड रोडको चिनियाँ परियोजनाबाट वैकल्पिक मार्ग प्राप्त गर्ने नेपालको चाहना छ । चीनको पनि यसमा आफ्नै स्वार्थ छ । ऊ दक्षिण एसिया जोड्नका लागि रसुवागढीमा रेल ल्याउन चाहन्छ । यहाँनिर नेपालको सानो बजारका लागि चीनले किन यतिधेरै मिहिनेत गर्दैछ भन्ने प्रश्न पनि उब्जन सक्छ । चीनको नजरमा नेपालको सानो बजार मात्रै नभएर बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश, बंगलादेश हुँदै दक्षिण एसियाका अन्य स्थान स्थान प्रवेश गर्न चाहन्छ । स्वार्थ मिलेकाले दुवै देश यसमा विनविन सिचुएसनमा देखिन्छन् । तेस्रो देशमा जान पाउने बाटो पछिल्लो सहमतिले प्रदान गरेकाले नेपाल स्वर्ण युगमा प्रवेश गरेको मेरो बुझाइ छ ।
० वेल्ड एण्ड रोडले नेपाललाई स्वर्ण युगमा प्रवेश गराउने तपाईंले बताउनु भयो । तर, यसमा फाइदा लिन सकिनेबारे देशभित्र अलि खुला छलफल भएन भन्ने कतिपयको गुनासो रहने गरेको छ । यसमा तपाईंको मत के छ ?
–चीनको यो महत्त्वकांक्षी योजनाबारे केही वर्षदेखि चर्चा हुँदै आएको छ । यद्यपि, कतिपयले नेपालमा यसबारे खुला छलफल भएन गुनासो गर्ने गरेको यदाकदा सुनिन्छ । चीनको यो प्रोजेक्ट वृहत् भएकाले यसबाट नेपालले लिन सक्ने फाइदाबारे जति धेरै छलफल भयो, उतिधेरै फाइदा लिन सकिने कुरा सत्य हो । यसमा धेरै प्रोजेक्ट राखेर विगतमा छलफल भएको थियो । अहिले नौवटा राखिएको छ । यसमा कतिमा सम्झौता हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
० भारतलगायत देशसँगको सम्बन्धलाई लिएर खुला छलफल हुन नसकेको कतिपयको तर्क छ । यसमा कति सत्यता छ ?
–संसार भनेको भारत मात्रै हो भन्ने सोच विगतमा थियो । तर अहिले चीन पनि अर्को महत्त्वपूर्ण देश हो भन्ने भएको छ । अमेरिका पनि अहिले एक्टिभ्ली आइरहेको छ । नेपालमा चीनसँग प्रतिष्पर्धा गर्न भारतले मात्र नसक्ने भएकाले भारतले पनि यहाँ अमेरिकाको भूमिका बढोस् भन्ने चाहेको छ । त्यसैले नेपालले अब दुई ढुंगाबीचको तरुल नभईकन नेपालको कूटनीतिक पोलिसीको खाना पकाउन तीन खुट्टे ओदान (इन्डिया, चाइना र वेस्ट) सहितको कूटनीतिक नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । एक खुट्टे त भएन नै दुई खुट्टे पनि अब काम छैन । १–२ वटा देशको पोल्टामा बसिराख्ने कूटनीति पोलिसी अब काम छैन । भूमण्डलीकरणमा नेपालको बढ्दो भूमिकालाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।
० तपाईंले १–२ देशलाई मात्र रिझाउने कूटनीति अब काम छैन भन्नु भयो । वेल्ट एण्ड रोडमा नेपालले जनाएको प्रतिवद्धताले नेपालको अन्य देशसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा कस्तो असर पर्ने देख्नुहुन्छ ?
–रुस, जापान जान अब नेपालले छोटो बाटो भएर जान पाउने भएको छ । मध्य एसिया भएर कजाकिस्तान हुँदै सामान जाने बाटो खुलेको छ । खाडी देशले पिउने पानी देऊ, हामी पेट्रोल दिन्छौं भनिरहेको छ । यसले त नेपालको सम्बन्ध थप विस्तार हुने देखाएको छ । सानो घेरामा यसअघि सीमित रहँदै आएको नेपालको घेर थप फराकिलो भएको छ । हिजोसम्म नेपालको सानो बजारमा के लगानी गर्ने भन्दै मुख खुम्च्याउने गर्थे, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले । सस्तो श्रम बजार र कम लागतमा उत्पादन हुन सक्ने भएकाले नयाँ सम्भावनाको ढोका पनि खुलेको छ ।
० अघिल्लो संवादमा तपाईंले भारतले नेपालप्रति जुन नीति लिँदै आएको थियो, उसले नेपालसँगको नीति परिवर्तन गर्न लागेको भन्नु भएको थियो । त्यस्तो बदलाब आइसकेको हो ?
–पहिले नाकाबन्दी लगाएर पेलेर गर्न खोजेको थियो । तर त्यसमा ऊ असफल भयो । सारमा भन्नुपर्दा भारतको तरिका फेरिएको छ तर नियत र प्रवृत्ति उस्तै छ । पानीमा एकाधिकार जमाउने खोज्ने प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । केही सुधार्न खोजेको छ । यसर्थ हामीले भारतसँग सम्बन्ध सुधार्ने हो । चीनसँगको राम्रो सम्बन्धलाई थप राम्रो बनाउने हो । चीनसँगको सम्बन्धलाई सदाबहार भनिन्छ ।
समृद्धिका लागि आर्थिक साझेदारका रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । रेल नेपालबाट खाली नजाओस् भन्नका लागि प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा निर्यात गर्ने चिजहरूको तयारीमा अहिलेदेखि नै लाग्नुपर्छ । पिउने हिमालय पानीको पनि सम्भावना छ । आर्थिक सम्बन्धमा विविधीकरण गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
० वाम गठबन्धनको सरकारको विदेश नीति कस्तो हुनुपर्ला ?
–समनिकटता र सन्तुलनकै आधारमा कूटनीतिक सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्ने होइन, सन्तुलनकै आधारमा सम्बन्ध विकास गर्नु राम्रो हुन्छ ।
० लिपुलेकलगायतको सीमा विवाद बारबार उठ्ने गर्छन् । ओली सरकारले यो विषय पनि उठाउनुपर्ने होइन ?
–मलाई पनि लाग्छ कि लिपुलेक र कालापानीको समस्या पेन्डिङ छ । लिपुलेकको विषयमा चीन पनि भारतसँग अप्रत्यक्षरुपमा जोडिएको छ । हामीले विरोध ग¥यौं, व्यापारिक मार्गको रुपमा प्रयोग गर्न गरेको कुरामा । चीनले पुनर्विचार गर्ने कुरा गरेको छ ।
सूर्यनाथ उपाध्यायको आयोगले निमपियाधुरासम्म नेपाली सीमा हो भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यो कुरा नेपाली जनताको बीचमा ल्याउने र त्यो प्रमाणको आधारमा चीनलाई आफ्नो कुराहरू राखेर त्रिपक्षीय वार्ताका लागि नेपालले पहल गर्ने उपयुक्त समय यही नै हो ।
नेपालको सम्प्रभूता रहने गरी लिपुलेकको समाधान हुनुपर्छ । उनीहरूलाई धार्मिक तीर्थयात्राका लागि बाटो चाहिएको हो भने नेपालले लालपूर्जा आफूसँग रहने गरी यो सुविधा दुवै छिमेकीलाई दिन सकिन्छ । त्रिदेशीय आर्थिक सहयोग क्षेत्रका रुपमा यसलाई विकास गर्न पनि सकिन्छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल ग¥यो भने यसको ओज बढ्ने छ ।